Ngemuva kokunqoba kukaTrump, iChina ingahola Isivumelwano SaseParis | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sonke sazi, Donald Trump ukhethwe njengomongameli waseMelika. Izindaba ezimbi ngemvelo ukuthi ekushintsheni kwesimo sezulu sikaTrump akukho, ngakho-ke, uhlose ukususa i-US Isivumelwano saseParis.
I-United States iyizwe lesibili elikhipha umoya ongcolile kakhulu obamba ukushisa emkhathini. Ukufika kukaDonald Trump ehhovisi likamengameli kudale isimanga ku ingqungquthela yesimo sezulu (COP22) eMarrakech. Kodwa-ke, amazwe amaningi akuqinisekisile ukwesekwa kwawo ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Manje yiChina, izwe elikhiphela ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kakhulu emkhathini, izimisele ukusekela isivumelwano sezulu.
I-China ihlose ukuqhubeka nomqondo wayo wokwenza ushintsho lwamandla emnothweni ikhabhoni ephansi. Ukungcoliswa komoya eChina kuyinkinga enkulu kakhulu kwizakhamizi. Ukugxila okuphezulu kokungcola komoya okuvela embonini yamalahle kusho ukuthi izakhamizi eziningi azikwazi ukuphuma ngaphandle kwemaski. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi bayahlupheka futhi bafe ngenxa yezifo zokuphefumula.
Ilungu lethimba laseChina lithe ukuguqulwa kwamandla okwenziwa yiChina ukunyakaza okunganqandeki nokuthi ngoba kunohulumeni omusha e-United States ngeke bayeke. Isinqumo siqinile futhi yize umongameli wase-US engakholelwa noma engafuni ukubamba iqhaza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu, IChina ngeke ihlehle. Imizamo yomphakathi waseChina izoqhubeka nokukhula.
Ukunqoba kukaTrump okhethweni kube yinduku enkulu engqungqutheleni yezulu ebibanjelwe eMarrakech lapho cishe amazwe angama-200 Bavumelana ngemithetho okumele ilandelwe iSivumelwano saseParis esisanda kuqala. Kukhunjulwa ngokukhathazeka ukuthi, esikhathini esedlule, ukuhamba kwe George Bush wephrothokholi yaseKyoto ukhuthaze amanye amazwe athuthukile ukuthi angaqhubeki nesivumelwano sezulu. Basaba ukuthi izinhloso zikaTrump zizoba nomphumela ofanayo.
Umongameli omusha waseMelika kanye nokuguquka kwesimo sezulu
UDonald Trump usevele usekuvezile kaningi, ekungeneleni kwakhe ukhetho futhi manje nakumongameli wakhe, ngalolo shintsho lwesimo sezulu Kuwumkhohlisi owasungulwa amaShayina ukuze andise ukuncintisana kwawo. Ekungeneleni kwakhe ukhetho, wathembisa ukuthi, uma engumongameli, uzokukhansela ukuqinisekiswa kweSivumelwano SaseParis futhi ahoxise izimali kuzo zonke izinhlelo ze-UN kanye nemisebenzi ehlobene nokuguquka kwesimo sezulu.
Kumanje umemezele ukuthi, phakathi kwezinyathelo zakhe zokuqala eziyishumi lapho efika e-White House, enye yazo kuzoba njalo khansela izinkokhelo ezinhlelweni eziphathelene nokuguquka kwesimo sezulu. Le yinkinga ebucayi yesimo sezulu, uma kubhekwa ukuthi i-US iyizwe lesibili elibhekene nokukhishwa komhlaba. Kuzophinde kube kubi kakhulu kulawo mazwe asathuthuka afuna ukufaka isandla Esivumelwaneni saseParis, ebe ethuthuka kwezobuchwepheshe ngaphandle kokulimaza isimo sezulu. Lokhu kungenxa yokuthi i-United States kanye ne-EU ingomunye wabanikeli abakhulu bezezimali zezulu. Kusabelomali sezimali kuchazwa cishe ama- $ 3.000 billion uzibophezele kuze kube ngu-2020. Kuze kube manje, u-Obama ukhokhe ama-euro ayizigidi ezingama-500 kuphela esewonke.
Wonke amazwe aqinisekise iSivumelwano SaseParis alinde ukubona ukuthi uTrump ekugcineni wenza isinqumo sokuhoxisa izimali noma ashintshe indlela aphatha ngayo isishayamthetho sakhe. Inhloso yawo wonke amazwe ukuthi imizamo nezinqubomgomo ezithathiwe zikhona umthelela womhlaba wonke futhi usebenze njengesibonelo emazweni angakakuqinisekisi lokho.
Umongameli weCOP22, USalahedín Mezuar, wenze isimangalo esilandelayo:
"Isivumelwano saseParis ngeke siyeke ukusebenza ngoba elinye lamaqembu liyahamba, amanye amazwe akhona ukuzoqinisekisa ukuthi lizoqhubekela phambili futhi sinesiqiniseko sokuthi izakhamizi zase-US zizibophezele ngokuphelele kulokhu kulwa nenkinga enkulu kunazo zonke obhekene nobuntu "
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ngemuva kokunqoba kukaTrump, iChina ingahola iSivumelwano SaseParis